I-AAUA Portal Student www.aaua.edu.ng/b/student/ Uhlaziyo lwesicelo: Iindaba zeSikolo sangoku
I-AAUA Portal yabafundi: Igunya leYunivesithi yaseAdekunle Ajasin lenze ukuba i-portal yabafundi iqhubeke. Kwaye le portal kukwenza imisebenzi yezifundo zabafundi ibe lula. I-AAUA ngurhulumente kaRhulumente ophethwe kwaye usebenze eyunivesithi yaseNigeria.
Nangona kunjalo, qhubeka nje ufunde eli nqaku ukuze ufunde okungakumbi. Kodwa kuqala, wazi ntoni ngeAdekunle Ajasin University (AAUA)?
Kwakhona iyunivesithi ikwiAngngba Akoko, Ondo State, eNigeria. Ukongeza, banendawo yokungena apho abafundi kunye noluntu banokufunda ngakumbi malunga nesikolo.
IYunivesithi yaseAdekunle Ajasin?
IYunivesithi yaseAdekunle Ajasin (iAAUA) yasekwa okokuqala njengeYunivesithi yaseObafemi Awolowo ngo-Matshi 1982 ngurhulumente welizwe elidala laseOndo, elalikhokelwa yiNkosi engasekhoyo UMichael Adekunle Ajasin.
Nangona kunjalo, urhulumente wezomkhosi ophumeleleyo kwangoko weNavy Commodore UMichael Bamidele Otiko walitshintsha igama laba ngu-Ondo State University ngo-1985 Akungba Akoko kwi-Ondo State entsha yanyanzeleka ngo-1999.
Umthetho osayilwayo oxhasa ukufuduswa usayinwe waba ngumthetho yiRhuluneli kaRhulumente ngelo xesha UAdebayo Adefarati, ngo-Novemba ngo-1999. Kwaye oko kwakhokelela ekuhambeni kwesityalo sabasebenzi kwindawo endala e-Ado-Ekitito Akungba Akoko nge-1 Disemba 1999.
Ukubaluleka kweAAUA Portal yabafundi
Umfundi weAAUA Portal yenzelwe aBadala kunye naBafundi beDyunivesithi. Kukwenza iakhawunti okanye ungene ukuze wenze amanyathelo athile ezifundo ngokukhululeka. Umzekelo:
Intlawulo yeefizi zesikolo.
Ukongeza, isicelo sefom yokwamkelwa.
Ngapha koko, ukujonga iimfuno zokwamkelwa.
Ukujonga ubude beenkqubo.
Kwaye, ukhuphelo lweleta yokwamkelwa kunye nendlela onokuwabala ngayo amanqaku akho (GP & CGPA), kunye neminye imisebenzi enxulumene nokufunda.
I-AAUA yePortal yabafundi
Kwi-portal yabafundi be-AAUA yesidanga sokuqala (i-UTME / i-DE yabafundi) inkqubo yokuhlawulwa kwemirhumo onokuthi undwendwele http://eportal.aaua.edu.ng/frontend/.
Kwakhona, i-AAUA portal yomfundi yenkqubo yobhaliso kunye nentlawulo yemali yokwamkelwa onokundwendwela http://eportal.aaua.edu.ng/frontend/
I-AAUA Portal yaBafundi yeNkqubo yoBhaliso kunye neNtlawulo yeMali yoKwamkela
utyelelo http://eportal.aaua.edu.ng/frontend/.Kwaye uye kuQhagamshelo olukhawulezayo-> Ubume bokwamkelwa-> Jonga imeko yokwamkelwa.
Nangona kunjalo, kumgqatswa omtsha ongenayo iakhawunti, cofa kwindawo ethi "Yenza iakhawunti".
Kwakhona faka inombolo yakho yobhaliso ye-UTME ukuqinisekisa ukuba uhlawule kwaye uqinisekisile umrhumo wokwamkelwa. Nangona kunjalo, kwabo bangakhange baqinisekise ngemirhumo yabo yokwamkelwa, cofa indawo ethi "qinisekisa intlawulo".
Ngaphaya koko, ukuba ukuqinisekiswa ku- (ii) apha ngentla kuyaphumelela, uya kuthathwa uyile kwiphepha lokudala iakhawunti ukwenza iakhawunti yakho.
Gcwalisa ifom yokudala i-akhawunti ngokufanelekileyo kwaye ungenise. Iziqinisekiso zakho zokungena ziya kuthunyelwa kwifowuni kunye nedilesi ye-imeyile ngokukhawuleza. Uya kuthi emva koko ubhekiswe kwiphepha lokungena ukuze uqhubeke nobhaliso.
Sebenzisa inombolo yakho yefowuni kunye nedilesi ye-imeyile. Njengoko ezi iya kuba lijelo lokunxibelelana nawe xa uhlala eYunivesithi.
Kwakhona, ngena ngegama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha ukuqala ubhaliso lwakho.
Iifom zeDatha zihlelwe ngokwamacandelo amahlanu (5). Nceda ugcwalise ngononophelo kwaye ngokufanelekileyo.
Kukho amaxwebhu abalulekileyo afunekayo ukuze ulayishe ukugqibezela ubhaliso lwakho. Zezi: Isatifikethi sokuzalwa, isatifikethi semvelaphi, ingxelo efungelweyo yenkundla (Ngokuzithandela) kunye neleta yobungqina.
Kwakhona, ileta yokwamkelwa yeJAMB (ngokuzithandela), ipaspoti kunye neziphumo ze-O'level. Abagqatswa bokungena ngokuthe ngqo ukongeza, kufuneka balayishe iziphumo zabo ze-ND / NCE / IJMB. Nangona kunjalo, zonke ezi zinto kufuneka ziskeniwe kwifomathi yomfanekiso weJPEG.
Abaviwa abangenayo ileta yokungeniswa kweJAMB kufuneka baxele kwi-ofisi yokwamkelwa kwiYunivesithi xa beqala kwakhona.
Emva kokugqiba ubhaliso, qaphela. Nceda uhambe ngononophelo kwiifom kwakhona ngaphambi kokuba ucofe u "Gqibezela ungeniso".
Cofa kwindawo ethi “Gqibezela ungeniso” ukuze ugcwalise kwaye ungenise ubhaliso. Umboniso wokuqala okanye iphepha lengxelo liya kubonakala.
Phrinta iphepha lokujonga kuqala kwaye ujonge ingxelo yokujonga ngezantsi kokuprinta.
Abafundi abaphumelele ukuvavanywa banokuqhubekeka ebhankini ngentlawulo yeefizi zesikolo.
irisithi irisithi yentlawulo yesikolo ehlawulwe ebhankini ibalulekile. Iya kusetyenziselwa ukungqinisisa iifizi zesikolo kunye nobhaliso lwezifundo kwi-portal.
Nayiphi na eminye imibuzo nezikhalazo kufuneka zithunyelwe [imeyile ikhuselwe] Okanye uxele inkqubo yethu yamatikiti kwi-http: //eportal.aaua.edu.ng/ughelpdesk/
I-AAUA Portal yabafundi be-Undergraduate (i-UTME / i-De Students) Inkqubo yokuBhatala iMali
Jonga imeko yakho yoKwamkelwa ngokunqakraza kwiNdawo yokungena kwindawo yokufika. OKANYE kwiphepha lokufika kwendawo aaua.edu.ng. Kwaye uye kwikhonkco elikhawulezayo-> Ukwamkelwa kwemeko-> Jonga imeko yokwamkelwa
Kwakhona, nikezela ngenombolo yakho yobhaliso ye-UTME / DE kwaye ucofe ku Ngenisa iqhosha. Nangona kunjalo, ukuba unikwe imvume yokwamkelwa, iwindow popup iya kuboniswa ngomyalezo wokuvuyisana.
Ngapha koko, ndwendwela nayiphi na ibhanki kwilizwe lonke ekufutshane nawe. Fumana umxeleli uze ugcwalise umyaleli njengoko kuyalelwe kwiNyathelo 2 apha ngasentla.
Kwakhona xelela umphathi-mali okanye umniki-mali ukuba ufuna ukwenza intlawulo kwiYunivesithi yaseAdekunle Ajasin, iifizi zokwamkelwa kweAngba kwi-eTranzact Platform.
Ukongeza, emva kokuhlawula, qiniseka ukuba ulindile kwaye uqokelele irisithi yakho yokuhlawula i-eTranzact. Oku kubalulekile njengoko kukufikelela kwakho ekushicileleni ileta yakho yokwamkelwa.
Emva kokufumana irisithi yakho yentlawulo ye-eTranzact, qaphela. Yiya kwi-Intanethi kwakhona kwaye uqinisekise intlawulo yokwamkelwa kwemali oyenzileyo ebhankini. Oku kuyimfuneko ukuqinisekisa ukuba ungumnini wokwenene weRisithi yeNtlawulo ye-eTranzact.
Nangona kunjalo, ukuqinisekisa ukwamkelwa, cofa kwi-Links ezikhawulezayo-> Intlawulo yoKwamkelwa kweNtlawulo-> Qinisekisa iiNtlawulo zoKwamkelwa.
Kwakhona, kwiphepha lesiQinisekiso seMirhumo yoLwamkelo, qaphela. Uya kubonelela nge- Ubhaliso lwe-UTME / DE Inombolo kunye neNombolo yeNombolo yokuQinisekiswa kwiRisithi yakho yeNtlawulo ye-eTranzact oyifumene ebhankini. Kwaye ucofe ku Ngenisa iqhosha ukuqinisekisa intlawulo yokwamkelwa.
Ngapha koko, wakube uphumelele, qaphela. Uya kuthunyelwa kwiphepha apho uya kuba nakho ukuprinta ileta yakho yokwamkelwa.
Kwiphepha leleta yokwamkelwa, nikezela inombolo yakho yobhaliso ye-UTME / DE. Kwaye ucofe ku-Ngenisa ukuze ujonge kwaye uprinte ileta yokungeniswa kwethutyana
Ungazisebenzisa njani iiNkonzo ze-imeyile eziSemthethweni zeAAUA
Kunyanzelekile kubo bonke abafundi ukuba basebenzise i-imeyile esemthethweni ababeza kuyinikwa emva komsitho wematriki. Ifomathi yedilesi ye-imeyile inikwe njenge imatriki yomfundi hayi@ aaua.edu.ng, umzekelo; [imeyile ikhuselwe].
Emva kwematriki, lo mzekelo ungasentla wedilesi ye-imeyile esemthethweni iya kwabelwa abafundi abafumene inombolo yabo yematriki. (Qaphela: -I-imeyile esemthethweni yahlukile kwi-imeyile esetyenzisiweyo ngexesha lenkqubo yokubhaliswa kwedatha)
Kananjalo, abafundi kufuneka bangene kwi-imeyile ku-www.mail.aaua.edu.ng kwaye uchwetheze igama labo lomsebenzisi okt imatriki yomfundi [imeyile ikhuselwe] kulandelwa ligama lokugqitha eliza kuthunyelwa kwinombolo yomnxeba yabafundi ngeSMS.
Ukongeza, emva kokungena, uya kucelwa ukuba utshintshe ipaswedi engagqibekanga kwi-password yakho.
QAPHELA: I-imeyile esemthethweni iya kusetyenziswa kulo lonke ixesha lokuhlala kwabafundi ekhampasini de baphumelele. Inokusetyenziselwa ukwabelwa kweklasi kunye nezinye iinjongo ezifanelekileyo zemfundo.
Uyifumana njani i-AAUA Student Portal Helpdesk
Nceda ufunde la manyathelo alandelayo ukuze usebenzise i-AAUA Helpdesk: Yiya ku-www.aaua.freshdesk.com kwaye ucofe kwiLogin.
Okulandelayo kukucofa 'ungene usebenzisa igoogle'.
Kwakhona, ngenisa idilesi yakho ye-imeyile esemthethweni esele yenzelwe wena okt Inombolo yakho yeMatriki okanye [imeyile ikhuselwe] njengegama lakho lomsebenzisi elilandelwa liPhasiwedi yakho. (Qaphela: -Akuyomfuneko ukuba ubhalise)
Ukongeza, yongeza kwaye ungenise itikiti elitsha; Ukuxela isicelo sakho / isikhalazo (Umlawuli kwi-ICTAC AAUA uza kuphendula kwisicelo sakho kungekudala).
Ndwendwela ku-www.mail.aaua.edu.ng kwaye ungene nge-imeyile yakho esemthethweni. Leyo yiMatriki yakho okanye [imeyile ikhuselwe] njengegama lakho lomsebenzisi elilandelwa liPhasiwedi yakho.
Emva koko jonga ibhokisi yakho engenayo ukufumana inombolo yekhonkco yetikiti lenkxaso oza kuyilandela kunye nokwazi imeko yetikiti obelithumele ngaphambili
Nje ukuba isicelo sakho siphathwe, uyakufumana iposi ngokuphendula kweso siphumo ngokufanelekileyo.
Awudingi kutyelela i-ICTAC AAUA ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela nguMlawuli kwimpendulo yakho. Kananjalo, abafundi ababhalisela okanye abangena ngemvume ngayo nayiphi na enye idilesi ye-imeyile ngaphandle kwedilesi ye-imeyile ye-AAUA abanikwe yona baya kulahlwa).
Inkqubo yokuHlawula iiMali zeZikolo zeZidanga zokuqala (Abafundi ababuyayo)
Bonke abafundi ababuyayo kufuneka bajonge kwaye baprinte ii-Invoice zabo zokuBhatala iiFizi zeSikolo ukuze bazi ukuba bahlawula malini kwaye bangayigcwalisa njani imali yomxeleli kwaye benze intlawulo ebhankini.
Ukujonga / ukuprinta i-invoyisi yokuhlawula iifizi zesikolo, kwiphepha lokufika kwendawo, yiya kwiQhagamshelo elikhawulezayo-> Shicilela i-invoyisi yeefizi zesikolo-> Shicilela i-invoyisi yeefizi zesikolo
Nangona kunjalo, kwi-Printa yeSikolo yeeNtlawulo ze-Invoice, nikezela ngeNombolo yakho yeMatriki. Ukuba kufunyenwe kwiseti yokuhlawulwa kweefizi zesikolo, i-invoyisi yokuhlawula iifizi zesikolo iyavezwa ukuze ibonwe kwaye iprintwe. Ukuba ayifumanekanga, oko kuthetha ukuba awukwazi ukuhlawula ebhankini.
Kwakhona, nceda unxibelelane nesebe le-ICTAC leziko kwaye ubhalise izikhalazo zakho. Kule meko, siya kufuna ukukubona buqu ukusombulula umba kwaye uya kuba nakho ukujonga i-invoyisi yakho kunye nokwenza intlawulo yesikolo.
Ndwendwela nayiphi na ibhanki kwilizwe lonke ekufutshane nawe. Fumana umxeleli uze ugcwalise umyaleli njengoko kuyalelwe kwiNyathelo 2 apha ngasentla.
Kwakhona xelela umphathi-mali okanye umniki-mali ukuba ufuna ukwenza intlawulo kwiYunivesithi yaseAdekunle Ajasin, iAkungba yeeNtlawulo zeSikolo kwi-eTranzact Platform. Emva kwentlawulo, qiniseka ukuba ulindile kwaye uqokelele irisithi yakho yokuhlawula i-eTranzact.
Ufundo olunxulumene noko:
Ndisifaka njani isicelo sokwamkelwa kwabafundi sokudluliselwa kwabafundi
IPortal University yaseMadonna
I-LASU Portal yaBafundi
Ukufundiswa kweYunivesithi yaseHavard
IYunivesithi yaseFederal iOye Ekiti Portal
Inkqubo yokuHlawula iMirhumo yeSikolo sabaFundi abaDala (aBafundi abaBuyayo): Amanyathelo amaninzi
Emva kokufumana irisithi yakho yokuhlawula i-eTranzact, yiya kwi-intanethi kwakhona kwaye uqinisekise intlawulo yesikolo oyenzileyo ebhankini. Nangona kunjalo, ukuqinisekisa iifizi zesikolo, cofa kwiKhonkco ezikhawulezayo-> Intlawulo yeefizi zesikolo-> Qinisekisa iiFizi zesikolo.
Kwiphepha lesiQinisekiso seMirhumo yeSikolo, nikezela ngeNombolo yakho yeMatriki kunye neNombolo yokuNikwa isiQinisekiso kwiRisithi yakho yeNtlawulo ye-eTranzact oyifumene ebhankini kwaye ucofe kwiqhosha lokuThumela ukuze uqinisekise intlawulo yakho yesikolo.
Ukongeza, wakube uphumelele, uya kuthunyelwa kwiphepha apho uya kuba nakho ukungena kwiakhawunti yakho.
Ekungeneni kwiakhawunti yakho, ukuba uyenzile iakhawunti ngaphambili, ngena nje ngegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha kodwa awunayo iakhawunti ngaphambili, cofa kwindawo ethi "Yenza iakhawunti".
Qinisekisa ukuba intlawulo yesikolo iya kubonakala. Fakela iNombolo yakho yeMatriki kwaye ucofe ku Ngenisa iqhosha.
Ukuba uyiqinisekisile intlawulo yakho yesikolo ngaphambili, uya kuvunyelwa ukuba wenze iAkhawunti kunye neSMS yokungena kwakho. Nceda uqinisekise ukuba ngexesha lokudala iakhawunti, unikezela ngokusebenzayo kwenombolo yokuseta kunye nedilesi ye-imeyile.
Ngena kwiakhawunti yakho ngegama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha uze ugcwalise zonke iifom eziyimfuneko ngokufanelekileyo kwaye ungenise.
Ezi zilapha ngasentla zanele ukukunceda ukuba ufikelele I-AAUA yePortal yabafundi. Qinisekisa ukuba wabelana nabahlobo.
I-DS-160 Visa Login Portal kunye nesikhokelo sokuBhalisa ngo-2021
Ukufumaneka, ukusetyenziswa kunye nefuthe lezixhobo zokufundisa ekufundiseni itekhnoloji esisiseko kwizikolo eziziisekondari
Isikhokelo samanyathelo ngenyathelo malunga nendlela yokubhalisa kunye nokufaka isicelo kwiKhomishini yeNkonzo yaseKhaya (i-FCSC) yezeMisebenzi
Faka isicelo ngoku kwii-Esty zeKhaya eziBalulekileyo eziFunekayo eMsebenzini eLagos-2016
OOU Sika uMarko 2020/2021 Jonga iSebe eliPhezulu lokuCima indawo
Izifo zaseDatshi kunye nesiqalekiso soVimba
I-FULOKOJA Yinqumle uMark 2020/2021 kunye neSebe eliPhume iNqaku
tags: I-aaua yomfundi portal, I-aaua portal yomfundi kwisidanga sokuqala, Uyisebenzisa kanjani i-porta yomfundi ye-aaua, Ukubaluleka kwe-porta yomfundi ye-aaua
« Indlu yokubonelela ngokuSebenzela iNtloko, uLuhlu lweShishini 2021
Faka isicelo ngoku ngokuQesha okuqhubekayo ePricewaterhouseCooper (PwC) 2021 Uhlaziyo »
UMzalwana omkhulu uNaija 2021- Ulwazi olunenkcukacha malunga nalo
Crossover Jobs Portal eNigeria 2021 www.crossover.com
Imisebenzi yeCrossover eNigeria 2021 Inkqubo yokufaneleka kunye nesikhokelo
Eyona mithandazo mihle yeKrisimesi yokuyithetha kusapho kunye nabahlobo kuNcedo lokuBhiyozela
Iinkampani eziPhambili eziHlawulayo ezingama-25 eziPhezulu ezingama-2021
Imisebenzi yokufundisa kufutshane nam 2021 Jonga imfuneko yokufaneleka kwamva nje
Ukuqeshwa kwe-FRSC 2021/2022 Ifom yesicelo seFortal
Iindidi zeenkampani ekungafuneki ukuba uzisebenzele ngo-2021
Ukuqeshwa kwabasebenzi be-FRSC.frsc.gov.ng 2021/2022 Portal yesicelo
Imisebenzi eLagos 2021/2022 Isikhokelo sesicelo kunye neMfuneko yokuFaneleka
Imisebenzi yokuFundisa eNigeria 2021/2022 Izithuba zomsebenzi eziQhelekileyo ezikwi-Intanethi
I-FRSC yokuGaya iPortal kunye nePortal yesicelo seMisebenzi
Imisebenzi yakutshanje eNigeria 2021 yaBafundi abaDala ngokuBanga amaBanga aPhezulu
Imisebenzi ePort Harcourt 2021/2022 Isikhokelo sesicelo kunye neemfuno zokufaneleka
I-NYSC yokungena kwiDashboard 2021 I-NYSC Dashboard portal.nysc.org.ng
I-PTI Portal www.portal.pti.edu.ng Jonga uHlaziyo lweSicelo samva nje
Uvota njani kwi-BBNaija 2021-Inkqubo yoVoto iphela
Uhlaziyo lwe-UEI Portal 2021/2022 yoHlaziyo | Bhalisa iAkhawunti eNtsha apha
I-NDA yesicelo sePortal www.nda.edu.ng/#home/index Jonga uHlaziyo lwamva nje